Fironana marketing: ny fiakaran'ny ambasadaoro sy ny mpamorona | Martech Zone
Ny taona 2020 dia nanova ny anjara toeran'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fiainan'ny mpanjifa. Nanjary làlan'aina ho an'ny namana, fianakaviana ary mpiara-miasa izany, forum ho an'ny fikatrohana ara-politika ary ivon-toerana ho an'ny hetsika virtoaly maimaimpoana sy kasaina hatao.
Ireo fanovana ireo dia nametraka ny làlan'ny fironana izay hanova ny tontolon'ny varotra media sosialy amin'ny 2021 sy ny sisa, izay hampiasana ny herin'ny masoivoho marika hisy fiantraikany amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny marketing nomerika. Vakio hatrany raha mila fanazavana momba ny fomba ahafahanao mijery an'ireo mpisolovava, mpankafy ary mpanaraka sanda lafo vidy ireo mba hamolavola paikady marketing nomerika marina sy misy akony ho an'ny marikao.
Fironana 1: Ny atiny tena izy dia mamono ny atiny novokarin'ny Studio
Na dia lasa ivon'ny marketing marika aza ny haino aman-jery sosialy, ny atiny biolojika no eo am-pelatanan'ny mpanjifa, indrindra rehefa ampitahaina amin'ny doka.
Ao amin'ny Greenfly, hitanay ny fomba nandikana ity fomba voalohany-itanana voalohany ity tamin'ny indostria sy sehatra maro karazana. Ny ekipan'ny fampielezan-kevitra Biden for President dia nahita tamin'ny andrana natao tamin'izy ireo fa ny doka ara-politika nentim-paharazana - lahatsoratra 30-segondra somary matihanina - dia tsy dia nisy vokany firy noho ny sary tsy voadinika, sary avy any ambadika izay avy amin'ny mpifidy mampiasa ny finday avo lenta na webcam-dry zareo hizara ny filana amin'ny fifidianana.
Ny komity nasionaly demokratika dia nitodika tany amin'ny mpisolo toerana azy ireo ihany koa mba hampita ny hafatra amin'ny fantsona sosialy sy nomerika momba ny mpitari-bato ho an'ny mpifidy tamin'ny taona 2020, anisan'izany ny filoham-pirenena amerikana teo aloha mpankafy ny fifidianana Barack Obama ho azy Hifidy aho fampielezan-kevitra.
Tsy mbola nisy lanjany lehibe noho ny ankehitriny ny vatonao.
Androany ny andro fisoratana anarana ho an'ny mpifidy nasionaly. Mandeha https://t.co/XdZz4dh82T hisoratra anarana ary hanao drafitra hifidianana. Ary alao antoka fa toy izany koa ny olona rehetra fantatrao. pic.twitter.com/ItarX1d4zw
- Barack Obama (@BarackObama) Septambra 22, 2020
Ny atiny tena izy dia mandeha tsara eo amin'ny sehatry ny mpanjifa ihany koa. Ohatra, ny ekipa sosialy amin'ny franchise franchise Tiako ny Kickboxing dia afaka namelombelona sy manavaka ny marika hamaliany ny fepetra eo an-toerana COVID-19 tsena miovaova haingana, amin'ny fanangonana fanavaozana ny atiny voarakitr'ireo mpitantana studio an-toerana maherin'ny 100 manerana an'i Amerika Avaratra. SY SailGP tafita soa aman-tsara ireo atleta ekipa mandehandeha eran'izao tontolo izao hizara atiny nalaina avy amin'ny fakan-tsary nandritra ny fifaninanana.
Lahatsoratra iray nozarain'i SailGP (@sailgp)
Fironana 2: Tsy mpanaraka ny mpankafy - Anisan'ny ekipa mpamorona anao izy ireo
Manjary mpankafy ny mpankafy mpamorona kalitao (teny sasany aleon'ny sasany mihoatra influencers) izy ireo. Na dia misy aza mpampiasa-niteraka ny atiny dia mijanona hatrany amboarin'ny marika, tsy misy fomba tsara kokoa hampiroboroboana vokatra iray hafa noho ny fiantsoana ny tena traikefa avy amin'ny olona tena izy.
Eo afovoan'ny areti-mifindra, tsy misy fahitana ny parade-tape parade, ny Los Angeles Dodgers Niantso fankalazana virtoaly ny tompon-daka tamin'ny MLB World Series. Ny ekipa nomerika an'ny klioba dia nanangona mpankafy maherin'ny 3,500 handefa ny horonantsary fanehoan-kevitr'izy ireo tamin'ny alàlan'ny Greenfly, izay natambatr'izy ireo ho lasa montage vidéo media sosialy.
Nankalaza isika. Nitomany izahay. Nandresy izahay. #LATogether pic.twitter.com/U3nLivNz7K
- Los Angeles Dodgers (@Dodgers) Novambra 12, 2020
Ity fampielezan-kevitra ity dia nahafahan'ny ekipa naka an-keriny lavitra ny herin'ireo valin'ny mpankafy fankalazana ireo ary nanisy ireo mpiaro fatratra azy ireo tamin'ny fandresena.
Fironana 3: Ny haino aman-jery sosialy no kianja vaovao hampitomboana ny lanjan'ireo mpiara-miasa
Miaraka amin'ny fanakatonana manerantany ny ankamaroan'ny hetsika mivantana amin'ny taona 2020 sy ny fiakarana etsy ambony amin'ny fitaomana nomerika manerana ny sisintany, ny sosialy dia lasa zava-dehibe ankehitriny amin'ny fampisehoana ROI mpiara-miasa ary manampy amin'ny famenoana ny banga amin'ny fidiram-bola. Raha ny marina, ny haino aman-jery sosialy dia iray amin'ireo fantsom-barotra mahazatra mampihetsika sponsorship tato anatin'ny taona vitsy lasa.
Ny mpiara-miombon'antoka dia mitaky porofo misimisy kokoa momba ny fiverenan'ny fampiasam-bolany sy ny fahitana bebe kokoa amin'ny fomba anampian'ny orinasan-tserasera ny media sosialy. Ny fikambanana dia mahita an'io sanda io amin'ny varotra mivantana, ny varotra vaovao, ny fanentanana ny marika ary ny fampiroboroboana ny vokatra vaovao.
Araka ny nomarihina nandritra ny tontolon'ny Fanatanjahantena ara-panatanjahantena vao haingana, andiany dimy voalohany an'ny Major League Baseball, Voalohany miaraka amin'i Pete Alonso, natolotr'i Gatorade, mampifandray ny marika zava-pisotro ara-panatanjahantena amin'ireo mpankafy baseball amin'ny fomba organika amin'ny ligy fantsona YouTube.
Ny lanjan'ny mpanohana dia mety hitatra lavitra kokoa handrisihana ny fanovana sosialy misy dikany. Ny ekipan'ny cricket Rajasthan Royals dia nanangana a fampielezan-kevitra miaraka amin'ny napkinina fanadiovana NIINE any India, izay misy stigma tena mifamatotra amin'ny vanim-potoana. Nandritra ny fifaninanana IPL farany teo, NIINE nanolotra tovovavy sivy sivy hividianana servisy telo volana ho an'ny fihazakazahana rehetra izay nahatratra isa 186, ary zazavavy 1,674 XNUMX.
Lahatsoratra zarain'i Niine (@niineindia)
Ny marina, ny fanamafisana tena izy ary ny akora dia handresy ny doka marika an-tery foana. Ny fangatahana atiny vokarin'ny mpankafy dia ahafahan'ny marika mamorona fanentanana matanjaka izay manapaka ny fampiroboroboana doka. Hisongadina eo amin'ireo mpifaninana izy ireo izay misy antso avo kokoa ho an'ny mpiara-miasa ary, ho setrin'izany, hahita ny lanjan'ireo media sosialy amin'ny vola miditra.
Tags: dokam-barotramasoivohocontnet tena izymaha-azo itokianabarack obamaBidenCovid-19mpamoronaekipa mpilalao cricketkomitim-pirenena demokratikadncendorsementsatiny vokarin'ny mpankafympankafympanara-diagatoradelalitra maitsoTiako ny kickboxingHifidy ahoInstagramMpanalavitra an'i Los Angelestaranja baseball lehibefironana marketingMLBniineamin'ny voalohany miaraka amin'i Pete alonsoRajasthan royalssailgpservieta fidiovanahaino aman-jery sosialysponsorshipsgazety ara-panatanjahantenaTwitterny votoatin'ny mpampiasaYouTubefantsona YouTube
Tom Kuhr dia mpanatanteraka tetikady marketing manana sehatra marobe amin'ny varotra nomerika, fampidiram-bola ary media sosialy. Izy dia veteranin'ny fanombohana mahomby marobe ary nanampy tamin'ny fanangonam-bola, nanangana ekipa kilasy eran-tany, ary namorona programa marketing sy fandrosoana azo resahina ka afaka nitombo haingana. Toy ny CMO ho an'ny Greenfly, miasa akaiky amin'ny fanatanjahan-tena, haino aman-jery, marika mpanjifa ary franchise izy mba hamerenany sy handanjalanjana ireo programa marketing mahery vaika. Maneho ny feon'ny mpanjifa, ny vokatra azon'i Tom sy ny traikefany miavaka amin'ny mpanjifa dia nanjary fivoahana nahomby tamin'ny alàlan'ny IPO sy ny fahazoana azy.